Benzema oo ogolaaday inuu heshiis cusub u saxiixo kooxdiisa Real Madrid – Gool FM
(Madrid) 24 Jan 2020. Karim Benzema ayaa lagu soo waramaya inuu oggolaaday in qandraas cusub uu u saxiixo kooxda ku ciyaarta garoonka Santiago Bernabéu ee Real Madrid.
Laacibka reer France ayaa ah xiddiga ugu goolasha badan ee kooxda Zinedine Zidane xilli ciyaaredkan, 12 gool ayaana loo diiwan galiyay 19 kulan oo uu ka soo muuqday ololahan horyaalkan La Liga ee dalka Spain.
Sida laga soo xiganayo wargeyska ” AS” ee dalka Spain Benzema ayaa wadahadal qandraas kordhin ah kula jira Los Blancos tan iyo bishiii December ee sanadkii hore, Real Madrid iyo Karim ayaana ku faraxsan in heshiiska la balaariyo.
Warka waxa uu intaa ku darayaa in Real Madrid ay dooneyso inay hor istaag ku sameyso xiisaha ay Benzema u qabaan kooxaha kala ah Paris Saint-Germain iyo Lyon.
Wararka ayaa waxay intaas ku sii darayaan in Karim Benzema uu saxiixi doono qandaraas ku sii heyn doono garoonka Santiago Bernabéu ilaa iyo bisha June 2022.
32 sano jirkan ayaa kooxda Real Madrid kaga soo biiray naadiga Lyon sanadii 2009, 238 gool ayuuna u dhaliyay tan iyo xilligaas.